Kupro Railway Nhoroondo uye Mepu | RayHaber | raillynews
mushaTHE WORLDASIA90 TRNCKupro Railway Nhoroondo uye Mepu
16 / 05 / 2020 90 TRNC, ASIA, THE WORLD, Railway, PHOTOS, GENERAL
cibris njanji njanji nhoroondo
Iyo kambani yechitima inoshanda pasi pezita reCyprus Government Railway Company muCyprus pakati pe1905-1951. Akashanda pamutsetse pakati peEvrihu musha weRedke neguta reFamagusta. Pakati pamakore ayo anoshanda, yakatakura huwandu hwemazana matatu 3.199.934 emitakura uye vanokwana 7.348.643.
Kuvakwa kwayo kwakatanga muna1904, uye mushure mekuvhurwa kwechikamu cheNicosia-Famagusta, gumbo rekutanga remutsara, rakagadzirwa neBritish High Commissioner Sir Charles Anthony King-Harman, ndokuita ndege yake yekutanga kubva kuNicosia kuenda kuNicosia musi wa 21 Gumiguru 1905. Mugore rimwe chete, mabasa eiyo Nicosia-Omorfo mutsara wakatanga uye chikamu ichi chakapera mukati memakore maviri. Pakupedzisira, basa reOmorfo-Evrihu mutsetse rakatanga muna 1913, uye rwonzi rwakapedzwa muna 1915 nekutanga kwechikamu ichi.
Chinangwa chekuvaka ndechekufambisa miriwo, michero inogadzirwa kutenderedza dhorobha reOmorfo (Güzelyurt) uye ore yemhangura inobviswa kubva kuRobke dhorobha kuenda kuchiteshi cheLarnaca. Nechinangwa ichi, mutsetse weOmorfo-Larnaca wakatanga kutariswa. Asi papfuura nguva, kumira kwekupedzisira kwomutsetse kwakabviswa kubva kuLarnaca kuenda kuFamagusta, apo zvimwe zvezvakanaka muLarnaca zvakataura kuti njanji inonetesa kutengeserana nemakamera uye kuti vanofamba nemakamera vaizotambura nayo.
Rail mari yemari inosvika $ 127,468 (Pound) yakapihwa nechikwereti pasi peColombia Loans Act ya 1899, uye mutsetse wacho wakavakwa chaizvo neecontontontor contract.
Railway Line Ruzivo
Hurefu hwemutsetse ndewe makumi matanhatu nemakumi matanhatu nemaviri (76 km), hupamhi hwechitima hwakareba makubhiti maviri nemakumi matanhatu neshanu (122 cm). Paive nevaifamba netsoka pazviteshi zvina zvikuru. Nzvimbo yakatetepa yemutsara yaive 2 mu6 pakati paFamagusta Nicosia uye 76,2 mu 100 pakati paNicosia Omorfo.
Paive nezviteshi makumi matatu zvichitevedza mutsetse, kunyanya Evrihu, Omorfo (Güzelyurt), Nicosia naFamagusta. Mazita esiteshi akanyorwa muTurkey (Ottoman Turkish), Greek nechiRungu. Dzimwe dziteshi idzi dzaishandiswawo semasaiti uye nharembozha. Chitima chakatora chinhambwe pakati peNicosia neFamagusta munenge maawa maviri, nekumhanya kweyakaenzana kwe30 mph (approx. 30 km / h). Nguva yekufamba yemutsara wese yaive maawa mana.
Dhivhosi uye Dhiviriro
ruzivo urwu runobva kuna mutsetse muna 1912 uye sezvo mutsetse kubva Omorfo kusvika EVRYCHOU yakavhurwa Papera, chiteshi kure mashoko ose mutsetse kuti hachisi mazita ichi.
Kuvhara Railway Line uye Yekupedzisira Nguva
Sarudzo iyi yakaitwa neBritish colonies manejimendi yekumisa njanji nekuda kwekuvandudza kutakurwa kwepasi, kuderedzwa kwemadiro ezve njanji nezvikonzero zvehupfumi. Nesarudzo iyi yakatorwa muna 1951, makore makumi matanhatu nemaviri ejanji njanji yapera. Ndege yake yekupedzisira yakapera paFamagusta Station muna Zvita 48, 31 na1951: 14 nerwendo rwekuNicosia kuenda Famagusta.
Vangaita vashandi mazana maviri nevashandi vevashandi vehurumende vanoshandirwa nekambani iyi vakaendeswa kumahofisi ekutanga.
Railway Line Nhasi
Mushure railroads akamira, yeBritain yaitonga Kutarisirwa vakatengesa njanji zvose uye locomotives pamutsetse uye akatengeswa kuti kambani inonzi Meyer Newman & Co pa £ 65.626. Nechikonzero ichi, hapana zvikamu zvinosara kubva pamutsetse wetsetse.
Güzelyurt, Nicosia uye Famagusta yemapurisa zvivako mukati miganhu Northern Cyprus dzichiri amire uye ndivhurire basa munzvimbo dzakasiyana. EVRYCHOU Station, Ukuwo, iri munharaunda kutongwa Cyprus uye anoshanda zvimwe zvinangwa. Sevaviri vegumi nemaviri emamota anoshandiswa nekambani; The locomotive kwete. 12 riri mumunda wacho Famagusta Land kuhofisi yokunyoresa uye locomotive kwete. 1 iri muna Güzelyurt Festival Park.
EVRYCHOU Station, iyo zvakare ine emigodhi yemhangura, ichiripo nanhasi.
Kupro Railway Mepu
Isingazivikanwe Kupera Railway Nyaya
Mhinduro kumusorosoro wepamusoro-kutya kubva kuCyprus
EU-Supported Tram Project yeCyprus
Kunewo mapuramiro emitambo muCyprus
Dzidzisai vatyairi vanodzidziswa neMetro Istanbul kugamuchira chiremba
Mamiririri emitambo itsva yeMetro Istanbul akawana kukohwa kwavo
Nhoroondo dzeDHMI dze2015-2016 Makore Akabudiswa
Kayseri Yekufambisa Yakagadzirira Muenzaniso paKupro
Vabheji 'Mabheji Kubva Ekrem İmamoğlu
Ankaray Mepu Ankaray Line uye Ankaray Stops Mepu
About ESHOT ESHOT Inomira Mepu uye ESHOT Husiku Bhazi Migwagwa Mepu
Ruzivo nezve Nhoroondo yeBaghdad Railway Line Project
TCDD 3rd Dunhu Cumaovası - Torbalı - Selçuk Railway Project Superstructure…
Kupro Government Government Railway Company
Motokari Yenhoroondo Yenyika
Kutanga Nguva Yekutengesa Kuputika Kwepabonde Record Date MuTerevhiti Kutakura
TCDD Menemen Manisa Double Line Railway Project Projeketi basa rekuvaka…
TCDD 2. Dunhu Polatlı OIZ Indasitiri Yese Mutsetse Wecheanji Railingway Project Kuongorora, chirongwa,.